Edere site Tranquillus | Feb 1, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ihe ọ bụla oge, arụmọrụ abụrụla mgbe a na-achọsi ike na ụwa ọkachamara. Ihe odide a adighikwa n'akụkụ peeji mgbe a bịara n'ide ihe na-arụ ọrụ (nke a na-akpọkwa iji ya eme ihe). N'ezie, ọ bụ ntọala nke: akụkọ mmemme, akwụkwọ ozi, ndetu, akụkọ ...
Site na ihe atụ, Ajụla m n'ọtụtụ oge iji tụlee ọrụ ndị ọrụ ibe m n'ihe gbasara ọkachamara. Achọpụtara m maka ọtụtụ n'ime ha, ihe odide ndị na-adabaghị n'ọkwa ọmụmụ ha ma ọ bụ ọbụlagodi ọkachamara anyị. Dị ka ihe atụ, tụlee ahịrịokwu a:
« N’iburu n'uche ebe ekwentị na-etolite na ndụ anyị, ụlọ ọrụ ekwentị ga-etolite ruo ọtụtụ afọ na-abịa.. »
Enwere ike dee otu ahịrịokwu a n'ụzọ dị mfe, ma karịa nke kachasị dị irè. Ya mere, anyị nwere ike inwe:
« Ebe na-eto eto nke ekwentị mkpanaka na ndụ anyị na-eme ka mmepe nke ngalaba ekwentị rụọ ọrụ ruo ogologo oge. »
Nke mbu, rịba ama nhichapụ okwu ahụ "maka ele". N’agbanyeghi na iji okwu a abụghị nkọpe, ọ kaghị aba uru maka ịghọta ahịrịokwu. N’ezie, okwu a karịrị akarị na ahịrịokwu a; ahịrịokwu a iji jiri okwu ndị ọzọ na-eme ihe ga-eme ka onye ọ bụla na-agụ ya ghọta nke ọma ozi dị na ozi ahụ.
Mgbe ahụ, na-eburu n'uche ọnụ ọgụgụ nke okwu na ahịrịokwu ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe dị iche na okwu 07. N’ezie, okwu iri abụọ maka mkpụrụokwu edegharịrị megide mkpụrụ okwu 20 maka ahịrịokwu izizi. Na mkpokọta, otu ahịrịokwu kwesịrị ịnwe nkezi nke okwu 27. Ọnụ ọgụgụ dị mma nke okwu nke na-ezo aka n'iji ahịrịokwu dị mkpirikpi eme ihe na otu paragraf ahụ maka nhazi ka mma. A ga-atụgharị uche nke ọzọ iji gbanwee ogologo ahịrịokwu na paragraf iji nwee ederede ederede. Agbanyeghị, ahịrịokwu ndị toro ogologo karịa okwu iri atọ na ise anaghị eme ka ịgụ ihe ma ọ bụ ịghọta ihe dị mfe, wee si otú a gosi na ịdị adị ogologo oge dị. Iwu a metụtara mmadụ niile ma ọ bụ onye dị nfe ma ọ bụ onye gụrụ akwụkwọ, maka mmebi ya na-egbochi ikike icheta ikike ụbụrụ mmadụ.
Na mgbakwunye, rịba ama nnọchi nke "ọtụtụ afọ" site na "ogologo". Nhọrọ a na-ezo aka na ọmụmụ banyere Rudolf Flesch na ọgụgụ, ebe o gosipụtara mkpa ọ dị iji mkpụrụ okwu dị nkenke rụọ ọrụ nke ọma n'ịgụ ihe.
N'ikpeazụ, ị ga - ahụ mgbanwe nke usoro ahụ site na ụda olu gaa na olu nọ n'ọrụ. Ahịrịokwu a ga-ekwe nghọta karị. N’ezie, usoro atọrọ n’ahịrị a na-egosi n’ụzọ doro anya na n’ụzọ doro anya njikọ dị n’etiti ọrụ na-eto eto nke ekwentị na mmepe nke ahịa telephony. Otu ihe kpatara ya na ihe mmetụta nke na-eme ka onye na-agụ ya ghọta isiokwu ahụ.
Mee elu mee ala, ide ederede na-eme ka onye nyere ya gụọ ya ruo na njedebe, ghọta ya n’ajụghị ajụjụ; nke a bụ ebe ịdị irè nke ederede gị dị.
Chọsie ike maka arụmọrụ naanị site na ịde ihe! Ọnwa Abụọ 8, 2021Tranquillus
gara agaEbe dị anya, ihe nkpuchi, nri: mgbanwe ọhụrụ metụtara ọrịa Covid-19
-esonụNdi nkwekorita ndi mmadu nke n’eme ugwo olu na-emetuta ndi oru achupuru tupu etinye ya aka?